Madaxweyne Laga Soo Celiyay Lacag Malaayin Doolar Ah Oo Uu Musuq Maasuqay |
Madaxweyne Laga Soo Celiyay Lacag Malaayin Doolar Ah Oo Uu Musuq Maasuqay
In ka badan $267m doolar oo uu lahaa madaxweynihii kaligii taliska ahaa ee Nigeria ayaa laga helay bangi ku yaalla dalka Jersey.
Lacagta ayaa aheyd mid lagu dhacay qaab musuq maasuq ah xilliggii uu madaxweynaha ka ahaa Nigeria Sani Abacha sagaashamaadkii, sida laga soo xigtay laanta dabagalka lacagaha la lunsado ee Jersey.
Shirkad ka tirsan Shell ayaa lacagta qabatay taas oo sannadkii 2014-kii lagu xayiray bangiga.
Kaddib shan sanno oo ay socotay dacwad ku aadan arrintani, ayaa waxaa suurogashay in la helo lacagta oo ay kala qaadan doonaan Jersey, Mareykanka iyo Nigeria.
Xeer ilaaliyaha guud ee Jersey, Robert McRae QC, ayaa waxaa uu sheegay in tallaabadan ay muujineyso dadaalka Jersey ee ku aadan xakameynta dambiyada caalamiga ah ee xaddida lacagaha iyo musuq maasuqa.
Sani Abacha ayaa talada dalka Nigeria hayay laga bilaabo sannadkii 1993-dii tan iyo geeridiisii sannadkii 1998-kii.
Saraakiisha arrimaha sharciga ee Jersey ayaa waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan sida dowlahadan ay lacagtan la helay u kala qeybsan doonaan sababta oo ah haddii ay ka hadlaan waxay saameyn ku yelaan kartaa wadahadallada hadda socda ee ku saabsan arrintaas.
Dowladda Jersey waxay sheegtay in arrintani ay kala hadashay Mareykanka sannadkii 2007-dii oo ay ka codsatay in maxkamadaha Mareykanka laga bilaabo dacwadda ku saabsan lacagahan laga soo xaday Nigeria.
Lacagtan malaayiinka ah ayaa waxaa la tuhunsan yahay in lasoo xaday xilliggii Nigeria uu madaxweyne ka ahaa Abacha.
Dalka Switzerland ayaa sannadkii lasoo dhaafay $300m oo doolar dib ugu celiyay Nigeria kaddib markii la ogaaday in lacagahaasi laga soo lunsaday dalkaas.
Lacagtan ayaa lixda sanno ee so socota loo qeybinaya ilaa 300,000 oo shacabka Nigeria ah..